पछिल्लो केही दिनयता गुगलको चीनको व्यापार धेरै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । यसै विषयमा केहीले गुगलले चिनियाँ सैन्य समुहसँग मिलेर काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । साथै केहीले अमेरिकासँग गुगलमाथि अनुसन्धानको गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो प्रशासनले त्यसका लागि उचित कदम चालिने बताएका छन् । अझै पनि गुगलको चीनको बजारमा के स्वार्थ छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन । यहाँ चीनमा… पुरा पढौ
चन्द्रमामा पहिलो पटक महिला !
पहिलो पटक चन्द्रमामा मानिसले पाइला टेकेको ५० औं वर्षमा अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाले पहिलोपटक महीलालाई चन्द्रमामा पठाउने योजनामा काम गरिरहेको बताएको छ । यो कार्यक्रमलाई आर्टेमिस नाम दिइएको छ । नासाका अनुसार अहिले अघि सारिएको योजना आगामी दिनमा मंगलको लागि पनि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । साथै यो चन्द्रमा मिशन अनुसारको अन्तरिक्ष यात्रीले अहिलेसम्म कोही पनि नपुगेको क्षेत्रको पनि पहिचान गर्नेछन् । साथै उनीहरुले चन्द्रमाको सतहमा पानी, बरफ र अन्य प्राकृतिक… पुरा पढौ
बीस लाख इञ्जिनीयरको सामूहिक बीमा
बीस हजार इञ्जिनीयरको एकै पटक सामूहिक दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । जोखिमपूर्ण काममा खटिनुपर्ने भएकाले नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनबाट आयोजना हुने ५७औँ इञ्जिनीयर दिवसका अवसरमा प्रतिव्यक्ति रु १० लाखका दरले दुर्घटना बीमा गर्न लागिएको हो । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा डा त्रिरत्न बज्राचार्यले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा इञ्जिनीयरको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । बीमाङ्कबापतको पहिलो किस्ता रकम भने एशोसिएशन आफैँले उपलब्ध गराउने… पुरा पढौ
उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढ्यो इन्टरनेटको मूल्य, कति बढ्यो ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले साउन १ गते बुधबारदेखि इन्टरनेट सेवाको मूल्य १३ प्रतिशतले बढाएका छन् । सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने अडान नछाडेपछि प्रदायकहरुले शुल्क पनि १३ प्रतिशतले नै बढाएका हुन् । गत वर्ष नै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । सेवा प्रदायकहरुको संस्था आईएसपीएनले सरकारले सेवा शुल्क लिने भएपछि आफूहरु शुल्क बढाउन बाध्य भएको जनाएको छ । … पुरा पढौ
किन तिराइदैछ फेसबुकलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना
गोपनियताको बिषयमा आलोचित बन्दै आईरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना तिराईने भएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण अवैध रुपमा प्रयोग गरिएको बारेमा भईरहेको अनुसन्धानको क्रममा फेसबुकलाई सो जरिवाना तिराईने निर्णय भएको हो । यस बिषयमा अनुसन्धान गरिरहेको एफटिसीले फेसबुकलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना तिराउनुपर्ने ठहर गरेको हो । एफटिसीले फेसबुकका ८ करोड ७० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको जानकारी राजनीतिक परामर्शदाता क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले अवैधरुपमा पाई… पुरा पढौ
अव पर्यटक सुरक्षा र समस्याहरु पर्यटक प्रहरी मोवाईल एपबाटै
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को तयारी तीव्ररूपमा गरेसँगै नेपाल पर्यटन बोर्डले ‘पर्यटक प्रहरी मोबाइल एप’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले पर्यटकको सुरक्षा र पर्यटकलाई पर्नसक्ने समस्या समाधानका लागि एक हप्ता पछि सञ्चालन हुने गरी सो एप सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । सो एपमा पर्यटक प्रहरी रहेको स्थान, पर्यटकले नेपालमा बस्दा गर्न हुने र गर्न नहुने काम, हटलाइन नम्बर,… पुरा पढौ
गूगल प्ले स्टोरमा २ हजारभन्दा बढी खतरनाक फेक एप
एक शोधका अनुसार गूगल प्ले स्टोरमा २ हजारभन्दा बढी फेक एप छन् । युनिभर्सिटी सिड्नी एन्ड सीएसआईआरओ डेटा ६१ को दुई वर्षको अध्ययनले प्ले स्टोरमा कतिपय प्रसिद्ध एपको फेक भर्जन रहेको देखाएको छ । टेम्पल रन, फ्री फ्लो र हिल क्लाइम्ब रेसिङजस्ता एपको फेक भर्जन पनि प्ले स्टोरमा पाइन्छ । यस शोधमा १२ लाख एपको अध्ययन गरिएको थियो । एपलाई चिन्न गाह्रो यी एप वास्तविक एपसँग यति मिल्छन् कि, तिनीहरुलाई चिन्न… पुरा पढौ
स्मार्टफोन आविष्कार भएपछि मानिसहरू जतिखेर पनि स्मार्टफोनमा झुण्डिन थालेका छन् । यसको अधिक प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने अनेकौं अनुसन्धानले देखाएका छन् । हालै गरिएको एक अनुसन्धानले मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगबाट अनौठो खुलासा गरेको छ । मोबाइलले शरीरभित्रको अस्थिपञ्जरलाई परिवर्तन गरिरहेको अनुसन्धानले देखिएको छ । मोबाइल धेरै प्रयोग गर्ने युवाहरूको शिरमा सिंग निस्किरहेको छ । बायोमेकानिक्समा गरिएको अनुसन्धानले टाउको धेर झुकाउँदा युवाहरूको खोपडीको पछिल्तिर सिंग निस्किरहेको देखिएको छ । मेरुदण्डको हाड… पुरा पढौ
को हुन् इन्टरनेटका मालिक ?
इन्टरनेट हाम्रो दैनिकीको जरुरी हिस्सा बनिसकेको छ । आज हरकाममा हामी इन्टरनेटको मद्दत लिने गर्दछौं । सामान्य घरेलु कामदेखि ठूला ठूला सैनिक तालिमहरुको लागि पनि इन्टरनेटको नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ । इन्टरनेटले हाम्रो दुनियाँलाई एकदमै नजिक ल्याउने गरेको छ । साथमा हामीले जे सिक्न चाहन्छौं त्यो सजिलै सिक्न सक्ने समेत बनाइदिएको छ । इन्टरनेट एक अर्कासँग जोडिएकोको कैयौं कम्प्यूटरहरुको एक जालो हो । जो राउटर एवं सर्भरको माध्यमद्वारा दुनियाँको कुनैपनि… पुरा पढौ